Ngethuba le-Third Reich, u-Albert Speer wayengumyili we- Adolf Hitler kwaye, ngexesha leMfazwe Yehlabathi II , waba nguMphathiswa wezeMpi waseJamani. I-Speer yayiye yaqwalasela uHitler kwaye yagqitywa kwangaphakathi kwisangqa sayo sangaphakathi ngenxa yobuchule bakhe bokuzakhela, ingqwalasela yakhe, kunye nokwazi kwakhe ukwakha iiprojekthi ezakhiweyo zeprojekthi ngexesha.
Ekupheleni kwemfazwe, ngenxa yesimo sakhe esiphakeme kunye nesimo sobulungiseleli obubalulekileyo, uPerer wayengomnye wamaNazi afuna kakhulu.
Wabanjwa ngoMeyi 23, ngo-1945, u-Speer wazama eNuremberg ngenxa yolwaphulo-mthetho olujongene noluntu kunye nolwaphulo-mthetho, kwaye wabanjwa enetyala ngokusetyenziselwa kwakhe okukhulu.
Kulo lonke uvavanyo, u-Speer waphika naluphi na ulwazi oluthile lobunzima beNkohlakalo . Ngokungafani namanye amaNazi aphezulu awayevanywa eNuremberg ngowe-1946, i-Speer yabonakala ibuhlungu kwaye yavunyelwa ukuba ityala lihlanganyelwe ngamaNazi ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Ukunyaniseka okupheleleyo kwempembelelo kunye nokunyaniseka kwakhe emsebenzini ngelixa ephazamisekile kwiNkohlakalo yaBantu kuye kwabangela ukuba abanye bathi "yiNazi yamaNazi."
I-Speer yagwetywa iminyaka engama-20 entolongweni, eyayikhonza eSpandau Intolongo eWest Berlin ukusuka ngoJulayi 18, 1947 ukuya ku-Oktobha 1, 1966.
Ubomi Ngaphambi kweReich Reithathu
Wazalelwa eManheim, eJamani ngo-Matshi 19, 1905, u-Albert Speer wakhulela kufuphi nedolophu yaseHeidelberg endlwini eyakhiwe nguyise, umakhi ovelele. U-Speers, owintsapho ephakathi, wenza ngcono ngakumbi kunamaJamani amaninzi, ahlupheke kakhulu ngexesha nangemva kweMfazwe Yehlabathi I.
I-Speer, ngokugxininiswa kukayise, yafunda uphuhliso lweekholeji, nangona wayenokukhetha iimathematika. Waphumelela ngowe-1928 waza wahlala eyunivesithi yaseBerlin ukuba asebenze njengomncedisi wokufundisa omnye wabafundi bakhe.
Speer watshata noMargarete Weber ngaloo nyaka, ngenxa yezichaso zabazali bakhe, ababekholelwa ukuba akafanelekanga unyana wabo.
Esi sibini sahamba saba nabantwana abathandathu.
Intetho ijoyina iNational Party
I-Speer yamenywa ngabanye abafundi ukuba baye kwiintlanganiso zokuqala zamaNazi ngoDisemba 1930. Ezingqiniswanga izithembiso zikaAdolf Hitler zokubuyisela iJamani kwimeko yakudala, uPerer wajoyina iNational Party ngoJanuwari 1931.
I-Speer yayiza kuthi emva koko ibhekiswe icebo likaHitler lokudibanisa amaJamani kunye nokuqinisa ilizwe labo, kodwa ukuba yayingayifumani ingqalelo kwi-Hitler's racist, anti-Semitic rhetoric. Ngokukhawuleza waba negalelo elikhulu kwiNkampani yamaNazi kunye nelinye lamalungu alo athembekileyo.
Ngomnyaka we-1932, u-Speer wathatha umsebenzi wakhe wokuqala kwiNkampani yamaNazi - ukulungiswa kwekomkhulu lezithili zendawo. Wayeseqeshwe ukuba aphinde aphinde aphinde ahlaziye uNgqongqoshe wamaNazi weNazi uJoseph Goebbels . Ngale mi sebenzi, i-Speer yaqhelana namalungu obuNazi bobuNazi, ekugqibeleni ihlangana noHitler kamva ngaloo nyaka.
Ukuba "ngumqambi kaHitler"
UAdolf Hitler, owayengumnyundeli waseJamani ngoJanuwari 1933, wathatha amandla ngokukhawuleza, waba ngumlawuli wecala. Ukunyuka kwamazwe aseJamani-kunye nokwesaba ngoqoqosho lwaseJamani-wanika uHitler inkxaso eninzi ayidinga ukuxhasa loo magunya.
Ukuze kugcinwe inkxaso eninzi, uHitler wambiza i-Speer ukuba ancede ukudala indawo apho uHitler angabutha khona abalandeli bakhe aze asasaze iiprogram.
I-Speer yafumana indumiso ephakamileyo malunga nokuyila kwayo iMeyi yoMhla weMeyi eyayibanjwe kwi-Airport ye-Tempelhof eBerlin ngowe-1933. Ukusetyenziswa kwakhe kwezibhengezo ezinkulu zamaNazi kunye namakhulu amabonakaliso enziwe ukuba kubekho imimangaliso.
Kungekudala, uPerer wazi kakuhle uHitler ngokwakhe. Ngethuba lokulungisa indlu kaHitler eBerlin, uPerer wayevame ukudla kunye noFührer, owayenomdla wokwakha izakhiwo.
Ngomnyaka we-1934, uPerer waba ngumqambi kaHitler, ethatha indawo kaPaul Ludwig Troost owafa ngoJanuwari.
U-Hitler wabeka i-Speer ngesabelo esinobugcisa-ukuyila nokwakhiwa kwesiza se-Nuremberg yeNational Party.
Iimpumelelo ezimbini zokwakha
Ukukhwa kweNkcazo yebala lezemidlalo yayinkulu kakhulu, kunye nezihlalo ezaneleyo kwiNgingqi yeZeppelin kunye nokuphakama okukhulu kwabantu abayi-160,000. Eyona nto ibangel 'umdla yayiwukusetyenziswa kwayo kwimiqolo eyi-150 yokukhangela, eyadulela iintambo zokukhanya ukuya esibhakabhakeni sasebusuku.
Ababhenkethi bayamangaliswa kula "magumbi okukhanya."
I-Speer yanikwa ikhomishini yokwakha i-New Reich Chancellery, yayikugqiba ngo-1939. (Kwangaphantsi kwesi sakhiwo esineenyawo ezili-1300, uHitler's bunker, apho uHitler azinikele khona ekupheleni kwemfazwe, yakhiwa ngo-1943. ) U
IJamani: I-Grandiose Plan
Ekholiswa ngumsebenzi weentetho, uHitler ucebise ukuba athathe iprojekti yaseRich yeyona nto eyakhayo ngokukodwa: ukubuyiswa kweBerlin ibe kwisixeko esitsha esihle kakhulu esibizwa ngokuba yi "Germania."
Izicwangciso zenza i-boulevard enkulu, isikhumbuzo kunye neendawo ezininzi zeeofisi zeeofisi. UHitler wanikela iGunya igunya lokukhupha abantu kunye nokubhubhisa izakhiwo ukulungiselela iindlela ezintsha.
Njengengxenye yale projekthi, i-Speer yayiphethe iindawo zokuhlala ezikhutshwe emva kokukhutshwa kwamawaka angamawaka amaYuda ukusuka kwiiflethi zabo eBerlin ngo-1939. Uninzi lwa maYuda lwagqithiselwa kwiinkampu eMpuma.
IHitler's Grandiose Germania, yaphazamiseka ngokuqala kwemfazwe eYurophu (oko uHitler ngokwakhe ayekusekele khona), ayayi kuze yakhiwa.
I-Speer iba nguMphathiswa wezixhobo
Kwimimiselo yokuqala yemfazwe, iNder yayingenayo inxaxheba ngokuthe ngqo kuyo nayiphi na impikiswano yongquzulwano, kunokuba ihlale ihlala kunye nemisebenzi yakhe yokwakha. Njengoko imfazwe yanda, kunjalo, u Speer kunye nabasebenzi bakhe bafumana ukunyanzela ukuyeka umsebenzi wabo kwiJamani. Baphendulela, endaweni yoko, ukwakha iindawo zokuhlasela ibhokhwe nokulungisa umonakalo owenziwe eBerlin ngeebhomu zaseBrithani.
Ngowe-1942, izinto zatshintsha xa amaNazi angama-Fritz Todt abulawa ngokungalindelekanga kwi-airplane crash, eyashiya uHitler efuna uMphathiswa wezoMkhosi kunye neeNkcukacha.
Eyazi kakuhle ngeNtetho ingcaciso kunye nekhono lokwenza izinto, uHitler wamisela ukuthetha kwesi sikhundla esibalulekileyo.
U-Todt, owayengumhle kakhulu emsebenzini wakhe, wandise impembelelo yakhe ukubandakanya yonke into esuka kwimveliso yamathangi ekulawuleni kwamanzi kunye nemithombo yamandla ukulungelelanisa umzila weenqanawa zaseRashiya ukuze afane nezitimane zaseJamani. Ngamafutshane, u-Speer, owayengazange abe namava ngaphambili okanye kwimbutho yemfazwe, ngokuzumkileyo wazifumanisa ephethe ubuninzi bezoqoqosho.
Naphezu kokungabikho kwamava akhethekileyo, uWerer wasebenzisa izakhono zakhe ezinobungcali zokuphatha indawo. Ukujamelana neembambano ezihlanganyelweyo zeendawo zokuvelisa, imingeni yokunikezela ngemfazwe emibini, kunye nokunyuka kwamandla kunye nezixhobo, i-Speer ikwazi ukunyusa ngokumangalisayo ukuveliswa kweengalo kunye nezimbonakalo rhoqo ngonyaka, zijonge kuphela ekupheleni kwemfazwe ngo-1944 .
Iziphumo ezimangalisayo ze-Speer kunye noqoqosho lwezobukhosi baseJamani ziqikelelwa ukuba zandise imfazwe ngeenyanga okanye mhlawumbi ngeminyaka, kodwa ngowe-1944 wayenokubona ukuba imfazwe ayikwazi ukuqhubeka ixesha elide.
Xa iJamani ijongene nokutshatyalaliswa okuthile, Speer, owayengumlandeli othembekileyo ngokupheleleyo, waqala ukutshintsha umbono wakhe kaHitler. Xa uHitler wathumela uMyalelo weNero ngo-Matshi 19, 1945 ukuyalela onke amaziko okubonelela ngaphakathi kweReich ukuba atshabalalise, i-Speer yabalalisa umyalelo, ngokuthintela ngempumelelo ukukhutshwa kukaHitler-umgaqo-nkqubo wehlabathi ukususela.
Emva kweenyanga kunye nesigamu, uAdolf Hitler wazibulala ngo-Apreli 30, 1945 kunye neJamani yazinikela kwi-Allies ngoMeyi 7.
U-Albert Speer wafunyanwa waza wabanjwa ngabantu baseMerika ngo-Meyi 15. Ukubulela ukuba bambambe ephila, abaphandi bafuna ukwazi ukuba wayegcine njani uqoqosho lwezemfazwe eJamani xa ephantsi koxinzelelo olunjalo. Ngethuba leentsuku ezisixhenxe zokuphenywa, i-Speer ipholile kwaye iphendule yonke imibuzo yayo.
Ngelixa impumelelo enkulu yeNtetho ivela ekudaleni umsebenzi ogqithiseleyo, enye inxalenye yavela ekusebenziseni abasebenzi bekhoboka kulo lonke imfazwe ukuze kuqhutywe izixhobo zombini kunye nezixhobo. Ngokukodwa, le ntsebenzo yegqila yayivela kumaYuda aseghettos nakwiinkampu kunye nabanye abasebenzi abaphoqelelwe bevela kumazwe athile.
(I-Speer yayiza kubanga emva kwexesha lakhe ilingo engazange lenze ukuba yena ngokwakhe asebenzise ukusetyenziswa kwekhoboka; kunoko, wayecelile umkhomishina wokuthunyelwa kwabasebenzi ukuba afune abasebenzi.)
Ngo-Meyi 23, ngo-1945, abaseBritani babamba ngokusemthethweni i-Speer, bammangalela ngokulwa nolwaphulo-mthetho nolwaphulo-mthetho.
I-International Military Tribunal, eyenziwe ngokubambisana ngabemi baseMerika, iBritish, isiFrentshi kunye namaRashiya, yaqalisa ukutshutshisa iinkokheli zamaNazi. Izilingo zaseNuremberg zaqala ngoNovemba 20, 1945; I-Speer yabelane nenkundla kunye nabameli be-20.
Nangona i-Speer engazange ivume ukungabi netyala ngenxa yezobugwenxa, wathintela ityala lokuhlangana njengelungu lobuholi beqela.
Okumangalisayo kukuba, i-Speer yayitsho ukungabi nolwazi ngeNkohlakalo. Kwakhona wavakalisa ukuba wayezame ukuphumelela ukubulala uHitler usebenzisa igesi yetyhefu. Nangona kunjalo, loo mabango ayikazange iqinisekiswe.
Izivakalisi zanikezelwa ngo-Oktobha 1, 1946. I-Speer yafunyaniswa netyala kwizinto ezibini, ngokubhekiselele kwinxaxheba yakhe kwinkqubo yokunyanzeliswa komsebenzi. Wanikwa isigwebo seminyaka engama-20. Kwababambisene naye, abayishumi elinanye bagwetyelwe ukufa, abathathu banikwa entolongweni, abathathu bahlawulwa, abanye abathathu bafumana isigwebo ukusuka kwiminyaka eyi-10 ukuya kwe-20.
Ngokuqhelekileyo kuvunyelwene ukuba i-Speer ibalekele isigwebo sokufa ngenxa yesenzo sakhe enkundleni, ngokukodwa kuba wayebonakala ehlaziyekile kwaye yamkela ubuncinane ubuninzi bezenzo zakhe.
Ngo-Oktobha 16, 1946, abayishumi abafumana izigwebo zokufa baphathwa ngokuxhoma. U-Hermann Goering (umlawuli weLuftwaffe kunye nomnye owayengumphathi weGestapo) wazibulala ngobusuku ngaphambi kokuba abulawe.
Ukubanjwa Kwentetho Nobomi Emva kweSpandau
Ukungena entolongweni ngoJulayi 18, 1947, eneminyaka engama-42 ubudala, u-Albert Speer waba yintolongo kwinani lesihlanu ejele laseSpandau eWest Berlin. I-Speer yakhonza isigwebo sayo seminyaka engama-20. Ezinye iziboshwa zaseSpandau zazingabanye abathathu abagwebi abagwetywe kunye naye eNuremberg.
I-Speer yajamelana ne-monotony ngokuhamba ngeyardari kunye nokulima imifuno kwintsimi. Kwakhona wagcina idayari eyimfihlo yonke iminyaka engama-20, ebhaliwe kwiincwadi zephepha kunye nezisese zangasese. I-Speer yakwazi ukuzithungela kwintsapho yakhe, kwaye kamva yabashicilela ngo-1975 njengencwadi, iSpandau: I-Diaries Secret.
Ngethuba lokugqibela lokuvalelwa entolongweni, uWerer wabela ijele kunye namanye amabanjwa amabini kuphela: UBaldur von Schirach (inkokeli yentsha yaseHitler) noRudolf Hess (uSekela uFührer waya kuHitler ngaphambi kokuba abalekele eNgilandi ngo-1941).
Phakathi kobusuku ngo-Oktobha 1, 1966, bobabini uS Speer noSchich bakhululwa entolongweni, bebenokuvakalisa isigwebo sabo seminyaka eyi-20.
Speer, oneminyaka engama-61 ubudala, wajoyina umfazi kunye nabantwana bakhe abadala. Kodwa emva kweminyaka emininzi kude nabantwana bakhe, Speer wayengumphambukeli kubo. Wazama ukulungelelanisa nobomi ngaphandle kwejele.
I-Speer yaqala ukusebenza kwimemori yakhe, ngaphakathi kweReich Reich, eyapapashwa ngo-1969.
Emva kweminyaka eyi-15 emva kokukhululwa kwakhe, u-Albert Speer wabulawa ngo-1 kuSeptemba 1981 eneminyaka engama-76. Nangona abaninzi bebiza uAlbert Speer "amaNazi amahle," ulawulo lwamaNazi luye lwaba lixesha elide.
Iinyanga zibonakalisa i-Zodiac
Imfazwe yaseMerika: uLieutenant General Richard Taylor
Misa i-altare ye-Ostara kwiNkolelo yamaPagani
Ukuhlaziywa kweAventures Adventures kwiWonderland
I-Harness yeeKharityhi zeeMidlalo kunye neziphumo